Fantaro hoe ahoana ny DJ dia miresaka tsara amin'ny feo mihetsika tsara
Ahoana ny fomba ataon'ireo DJ dia miresaka tsara hatrany amin'ny vocal?
Miaraka amin'ny sasany dia manan-talenta, miaraka amin'ny hafa ny Teknolojia
Ny hoe "hitifirina ny lahatsoratra" na "hikapoka ny lahatsoratry" dia fomba fiteny ampiasaina hanambaràna ny zavakanto amin'ny firesahana amin'ny teboka rehefa manomboka ny "tononkalo" manomboka eo am-piandohan'ny feo. Miresaka ihany koa ny firesahana amin'ny loha-hevitra amin'ny fiandohan-tsofin'ny hira (ny familiana) tahaka ny hoe rehefa mandingana be na fitaovana iray dia mamorona sora-baventy lehibe indrindra.
Ny fanakanana ny lahatsoratra dia mitaky fanao maromaro satria ny fotoana sy ny fahatsapana rehetra dia mikasika izany. Talohan'ny mozika dia tao amin'ny ordinatera tao amin'ny onjam-peo no nampiasa DJ ny sarety iray nihazona hira, na nilalao tamin'ny mozika mivantana avy amin'ny 45 vinyl manokana. Ny 45 taona nomen'ireo orinasa mpamoaka horonan-tsarimihetsika dia matetika no nanindry ny sarimihetsika sy ny stereo (AM / FM) ary matetika dia nampidirina ny fotoana hampiasan'ny DJ.
Taty aoriana dia nanjary nalaza ny sarety nisy tambajotra mahazatra. Voasoratra foana ireo sarety, ka nahafantatra ny toerana misy ireo segondra ireo lahatsoratra. Ohatra: misy karazan-tsoratra mety hitovitovy amin'izany:
: 10/3: 42 / mihavasoka
Midika izany fa fampidirana 10 segondra izany raha tsy efa nanomboka ny feo, ilay hira dia 3:42 tamin'ny lavany ary nopotehiny izany.
Rehefa nanosika bokotra iray hanombohana ny sarimihetsika ireo mpanarato, dia nitety ny lisitry ny LED ny dizitaly mba hahafahany mahita ny fomba hahatongavan'ilay feo. Ny trano fialantsasatra sasany dia nanome famantaran-tariby, nalain'ny tononkalo tsy misy dikany teo amin'ilay sarety izay mety hamela ny DJ hahita ny fotoana sisa tavela talohan'ilay feo, izay vao tapitra amin'ny: 00.
Noho izany, ny dijea dia efa nanampy foana ny faharetan'ny fampirimana amin'ny hira. Saingy, ny fanaovana ny tsara dia mitaky fanao, fotoana, ary fahatelo fahatelo. Nanao radio be ny Top 40 sy Oldies aho tamin'ny androm-piainako ary naheno ny ankamaroan'ireo hira am-polony sy imbetsaka imbetsaka, tamin'ny farany dia tonga tamin'ny fotoana izay tsy nila ny famantaranandro na ny ora. Afaka niresaka sy nanitsy ny on-the-fly aho raha nanatona ny lahatsora-peo na ny feo.
Ampiharo amin'izany izany: rehefa mitondra fiara ianao amin'ny fifamoivoizana, ary mila mampihatra ireo fiara ianao, rehefa mandeha ny fotoana dia mampitombo ny fahatsapanao fa mihena amin'ny paikady tsy miovaova mba hahafahanao mitsahatra ao ambadik'ilay fiara eo alohanao, Tsy mahasakana izany. Izany no karazana fotoana na fahatsapana DJ hampiroborobo rehefa miresaka mozika an-tariby mankany amin'ny feo na mozika.
Ankehitriny, misy zavatra iray hafa. Miaraka amin'ny fahatongavan'ny fanaraha-maso an-kira, dia tsy voatery hanana DJs ny fahaiza-mianatra. Izany dia noho ny fanarahan-kevitry ny feo mamela azy ireo hanoratra izay tiany holazaina sy hametrahana ny feony eo anelanelan'ny hira.
Ny fitadiavana ny feo dia mety hahatonga ny feo vitsy tsy hay hadinoina - fa misy zavatra iray tokony holazaina ho an'ny fientanam-po amin'ny fianarana ny fomba hanaovana an'io fomba taloha io sy ny fanatontosana azy tanteraka. Mahafinaritra fotsiny izany.
Ahoana ny fomba fitahirizan'ny olona sy ny fomba fiasa?
Torohevitra hampidirana ny fampihetseham-peo ho an'ny tranokala
10 horonan-tsary mahaliana ao amin'ny YouTube
Fandaniana finday amin'ny tranokala: Ny fitaratry ny 2015
Ny 10 fitaovana tsara indrindra hampidirana ny podcast amin'ny site WordPress
Inona no dikan'ny dian-tongotra roa?
Inona no hampidirina amin'ny tolo-kevitry ny asa an-tery
Tranonkala malalaka sy mahafinaritra ho an'ny zazavavy
Inona no atao hoe '1337?' Ahoana no Fomba Miresaka Amin'ny 'Lazao Mitenena'?
Araho ny fehezan-kevitry ny telefaona: Fitsipika 4 rehefa mandefa IM na fanoratana voalohany
Nahoana no tokony hifandray amin'ny Internet ny TiVO?
Ambaran'i Echo Connect: Ahoana no ampiasana azy miaraka amin'ny valin-teninao
Fanaovan-tsarimihetsika fakantsary fanakanana amin'ny DSLR Cameras
Ny Best NFL Apps ho an'ny iPad
Ahoana ny famonosana fitaovana azo sintomina
Fanavaozana ny mpamily amin'ny Windows 7 Tutorial
Ny kabarin'ny radio Amerikana lehibe indrindra dia mampiseho ireo tompon'izao vanim-potoana rehetra izao
Ampio Hyperlinks amin'ny PowerPoint 2003 sy 2007 Presentations
Fanaraha-maso Plesk Control Panel
Inona no dikan'ny ISTG?
Inona ny rakitra DM?
Lenovo LaVie Z 13-inch Ultraight Laptop Review
Ahoana no hamerenana ny data Facebook anao
Ny 10 Best FM Transmitters amin'ny fiaranao amin'ny 2018
Tsindrio ny sary famantarana ao amin'ny tranonkalanao
Oviana no nalefan'ny mailaka voalohany?
Inona ny 'NIMBY'? Inona no dikan'io anarana io?
15 Ny Blogger Free Tools Tsy Mila Bilaogera Tsy Maintsy Miaina
Ahoana no fomba fanaovana fanoratana avy amin'ny Android 3.0 sy aloha
Fantaro ny famaritana sy ny tanjon'ny PASV FTP
Ahoana ny fomba hanovana ny fahitalavitra Apple TV Home Button